အရေးပေါ်လိုအပ်နေသည့် သောက်သုံးရေများကို လှေဖြင့်ပို့ပေးခြင်း
ရေးသားသူ Ye Lat Yi နှင့် Kris Cahyanto
မြန်မာ၊ ဇွန်လ ၂၀၁၉။
စစ်တွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် - ယခုနှစ်သည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရေ အလွန်ရှားပါးသည့် နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ မိုးမရွာနိုင်သေးပေ။ ယခုလို ခြောက်သွေ့သည့် နွေကာလ တာရှည်ခြင်းကြောင့် မိုးရေသိုလှောင်ထား သည့် ရေကန်များလည်း ရေခန်းခြောက်လုနီးပါး ဖြစ်နေလေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျေးရွာ ၅၀ ထက် ပိုပြီး ရေရှားပါးသည့် ပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေကြရ ပါသည်။
ဧပြီလ ၂၀ ရက် မှ စတင်၍ ယူနီဆက်သည် အနောက်ရွာ စခန်းသို့ ရေ ၃၅ ကုဗမီတာခန့် နေ့စဉ် သယ်ပို့ပေးနေခဲ့ပါသည်။
©UNICEF Myanmar/2019/Maung Maung Oo
အနောက်ရွာစခန်းတွင် နေထိုင်နေရသည့် ရွှေ့ ပြောင်းနေထိုင်သူ ဒေါ်ဇော်ရီနမ်ခါတာသည် ကလေး ရှစ်ယောက် မိခင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်ရေထုတ်ရန် ပြရသည့် ဗောက်ချာနှင့်အတူ ရေထည့်သည့် အိုး တို့ကို သယ်ယူလိုက်ပြီးနောက် မနက်နှင့်နေ့လည်ခင်းများတွင် စခန်းတွင်း ရေဖြန့်ဝေပေးသည့် နေရာသို့ ရေ ခွဲတမ်း ရယူရန် အခြားသူများနှင့် ဝင်ရောက် တန်းစီလိုက်ပါသည်။
Labels: Rakhine State, WASH, water and sanitation, water supply
ရေးသားသူ မေသက်သက်ဦး (Liza)
မေလရဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခုမှာ စာသင်ခန်းတစ်ခုထဲကနေ စူးစူးဝါးဝါးအသံတွေ၊ အော်သံတွေ၊ သီချင်းဆိုသံတွေနဲ့ တိရစ္ဆာန်အကောင်လေးတွေရဲ့အသံတွေကြားလိုက်ရပါတယ်။ ထိန်းလို့မနိုင်တဲ့ ကလေးငယ်တစ်စုရဲ့ အသံတွေလို့ထင်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ မဟုတ်ပါဘူး ဒါက လူကြီးတွေရဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က သရုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ကလေးတေးကဗျာတွေဆိုကြတယ်။ ပြီးတော့ဂိမ်းတွေကစားကြပါတယ်။
တချို့က စကားနားထောင်ပြီးလိုက်လုပ်တဲ့ကလေးတွေပုံစံ၊ တချို့က နှောင့်ယှက်ပေးတဲ့ ကလေးလေးတွေရဲ့ ပုံစံလုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာ တခြားအဖွဲ့တစ်ခုကတော့ အမူအရာတွေကို စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ သင်တန်းသားအားလုံးက ကလေးငယ်တွေရဲ့ သင်ခန်းစာအပေါ် သူတို့ဘယ်လောက်ကောင်းအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို အဖွဲ့လိုက် တက်တက်ကြွကြွ အတူတူဆွေးနွေးကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
Labels: Early Childhood Development, ECCD, Education
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများမှ အာဟာရချို့တဲ့မှုတွေအတွက် စဉ်းစားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁၄ ရက် - ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လခန့်ကစပြီး အသက် ၁၈ လအရွယ် နူးရ်ဘူရှာလေးဟာ ပြင်းထန်အာဟာရချို့တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အတွက် ယူနီဆက်အဖွဲ့ကြီးက ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ မောင်တော ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ ပြင်ပလူနာဌာန ကုထုံးအစီအစဉ် (OTP) ကနေ ဖြည့်စွက်အာဟာရတွေနဲ့ ကုထုံးတွေကို လက်ခံရယူလျက်ရှိပါတယ်။
အစီအစဉ်ကို စတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်က နူးရ်ဘူရှာရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ခုနစ်ကီလိုဂရမ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကုထုံးရဲ့ ကျေးဇူးတွေကြောင့် သူ့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ဘက်စုံအခြေအနေတွေ တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်လာခဲ့ပြီလို့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေလ်ကေယက်စ် ကပြောပြပါတယ်။ သူက အခုဆိုရင် ပိုပြီးဆော့တတ်လာပြီး သူ့အလေးချိန်လည်း တစ်ကီလိုဂရမ်တောင် တက်လာတယ်လို့ ဒေလ်ကေယက်စ်က အပြုံးတွေနဲ့ ပြောပြလာပါတယ်။
မောင်တောမြို့ရှိ အသက် ၁၈ လအရွယ် နူးရ်ဘူရှာ
©UNICEF Myanmar/2019/Khin Moe Aye
Labels: health, Malnutrition, Mother and Child, Myanmar, nutrition, Rakhine State, UNICEF
ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သန့်ရှင်းရေး အလုပ်နိုင်ဆုံးသူများအား မယ်သန့်ရှင်းနှင့် မောင်သန့်ရှင်းဆု ချီးမြှင့်
စာရေးသူ - ခင်မာဝင်းနှင့် အေးမာဇော်
မတ်လ ၂၀၁၉၊ မြန်မာ - (၇) နှစ် အရွယ် မဟန်စုလွင်လေး တစ်ယောက် “မယ်သန့်ရှင်း” ဆု ရသဖြင့် အင်မတန် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေလေသည်။
“တခြား သူငယ်ချင်းတွေလည်း တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်း ပိုပြီးလုပ်လာအောင် သမီးက ကူညီပြောပြပေးနိုင်လို့ အရမ်းပျော်တယ်။” ဟု မဟန်စုလွင် က ပြောပြပါသည်။
ကယားပြည်နယ်၊ ဒီမောဆိုမြို့နယ်ရှိ ဆင်တောင်အလယ်တန်းကျောင်းတွင် လစဉ်၊လတိုင်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ နေ့စဉ် ပြုမူလုပ်ဆောင်ပုံများကို စောင့်ကြည့်ပြီး “မောင်သန့်ရှင်း” နှင့် “မယ်သန့်ရှင်း” ချန်ပီယံ ဆုများ ချီးမြှင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုသည် ရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဆိုင်သည့် အသိပညာပေးလုပ်ဆောင်မှုများကို အားပေးသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှု ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကျောင်းတွင် ယူနီဆက်၏ အကူအညီဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးတပ်ဆင်ပေးပြီးနောက် အဆိုပါ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းဆိုင်ရာဆုကို ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်လာသည့် အပြောင်းအလဲများကို မြင်ရပြီး စိတ်အားထက်သန်နေသည့် ဆရာမ ဒေါ်မြင့်လှိုင်မှ သူမြင်တွေ့ရသည်များကို ပြောပြပါသည်။
ဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့်လှိုင်၊ မဟန်စုလွင်(လယ်) နှင့် သူငယ်ချင်းတို့တွဲ၍ ကယားပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းတွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေစဉ်။
©UNICEF Myanmar/2019/ Khin Mar Win
Miss Clean and Mr Clean WASH in Schools
by Khin Mar Win and A Mar Zaw
March 2019, Myanmar – Seven-year-old Ma Han Su Lwin is very proud of her ‘Miss Clean’ award.
“I’m feeling good about myself and happy to help other students learn how to improve their personal hygiene,” said Han Su Lwin.
Every month the students at Sin Taung Middle School in Demawso Township in Kayah State observe their daily behaviours and decide among themselves who gets the ‘Mr Clean’ or ‘Miss Clean’ champion awards. It’sakeen competition that builds awareness of water and sanitation issues and personal hygiene.
Teacher Daw Myint Myint Hlaing, Ma Han Su Lwin (center) and her friend posing forapicture at their school in Kayah State.
အငြိမ်းစားဆရာတစ်ဦးရဲ့ ကလေးငယ်တွေကျောင်းပြန်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးခြင်း
လူအများစုအတွက် နှစ် ၄၀ ကြာစာသင်ကြားပြီးတဲ့နောက် အငြိမ်းစားယူတယ်ဆိုတာ စာသင်ခန်းတွေကနေ အနားယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ် ဆရာကြီး ဦးသိန်းထွန်းစိုး အတွက်တော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ သူ အငြိမ်းစားယူပြီးမကြာခင်မှာပဲ ဆရာကြီးက စာဆက်လက်သင်ကြား ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကယားပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း လွိုင်ကော်မြို့ကနေ မိနစ် ၄၀ ကြာမောင်းရတဲ့ လွိုင်လင်လေးကျေးရွာက ကျောင်းပြင်ပ အလယ်တန်းပညာရေး (NFSMSE) စင်တာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်လေးကျေးရွာရှိ ကျောင်းပြင်ပ အလယ်တန်းပညာရေး (NFSMSE) စင်တာတွင်
တွေ့ရသည့် ဆရာကြီး ဦးသိန်းထွန်းစိုး။ ©UNICEF Myanmar/2018/Minzayar Oo
Retired teacher helps children back to school
Written by Thein Than Tun
For many people, retiring after 40 years of teaching would meanarest from the classroom but not for Thein Tun Soe, 63. No sooner had he retired, U Thein Tun Soe carried on teaching, this time inanon-formal middle school education (NFMSE) centre in Loilin Lay, 40 minutes’ drive from Loikaw City in the Eastern part of Kayah State.
U Thein Tun Soe at the NFMSE centre in Loilin Lay, Kayah State, Myanmar
©UNICEF Myanmar/2018/Minzayar Oo
အရေးပေါ်လိုအပ်နေသည့် သောက်သုံးရေများကို လှေဖြင့်ပို...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများမှ အာဟာရချ...